December 2014 | OKKALA STORE
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ 2015 နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုသော ပုံရိပ်မျ...
သံစုံတေးဂီတ၀ိုင်း နဲ့ ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ အဆိုတော် လင်း...
Lay Phyu ( ဒိုင်ယာရီ - 2014 )
ယုံကြည်ရာ Lay Phyu at MCC 13rd August 2014 သီချင်း...
ချေ (သဝေထိုးခခွေးယပင့်) Mp3 Lyrics Albumတေးဆို ။ ...
Myanmar Academy Awards 2014 အနုပညာရှင်များ ၏ PHOTO...
The piper (ပုလွေဆရာ)
The Interview (2014) Full Movie ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နု...
မိမိရဲ့သွေးပေါင်ချိန် တိုင်းတာပေးမဲ့ Blood Pressu...
လေပေါ်မှာ ဘယ်လိုထိုင်လဲဆိုတာ အဆင့်ဆင့်ရိုက်ပြသွားတာ...
Maze Runner(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
မြိတ်အသင်း နှစ် (၁၀၀) ပြည့် ရံပုံငွေ ပဒေသာကပွဲ နှင...
တော်ယုံ စိတ်နဲ့တော့ ၀င်ပြိုင်လို့ မဖြစ်ဘူး သေသွားေ...
S.I.R အဖွဲ့ ရဲ့ ROCK On The Block ရော့ဂီတဖျော်ဖြေပ...
အနုပညာရှင်များစွာ ပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ...
မနိုင်စိန် (မြန်မာ ဗွီဒီယို ဇာတ်ကား) ဇေရဲထက် ၊ ရွှေ...
ဘန်နီဖြိုး လူပျိုလှည့်တေး Album ထဲ ညှို့ ဆိုတဲ့ MT...
စကိတ်ပေါ်မှာ ကပြနိုင် မိန်းမပျို
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ 2015 နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုသော ပုံရိပ်များ
Arriving in style: Sydney locals, Demi Bryant, 22, and James Hundt, 28, celebrate the beginning of the New Year atopahigh-rise overlooking the iconic Sydney New Year's Eve fireworks sitting onaFord Mustang
And we're off: An estimated 1.6million people gathered on the shores of the Sydney Harbour for the midnight fireworks show
Posted by okkala net at 10:04 PM No comments: Links to this post
လက်တင်အမေရိကတိုက်၏ အကြီးဆုံးလိင်မှုပြပွဲကို ဘရာဇီးတွင် ကျင်းပ
လက်တင်အမေရိကသမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံးလိင်မှုဆိုင်ရာပြပွဲကို ဘရာဇီးနိုင်ငံ ဆာပိုလိုမြို့တော်
တွင် နိုဝင်ဘာ ၁ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အထူးစည်ကားခဲ့ကြောင်း အေအက်ပီ သတင်းတစ်ပုဒ်က
ထိုပြပွဲတွင် လိင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စများကို အသေးစိတ်ဆွေးနွေးသည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ ပြခန်းများ၊
အဖေါ်အချွတ် ကပြဖျော်ဖြေမှုများ ပါဝင်သည့်အပြင် လိင်ထောက်ကူပစ္စည်းများကိုလည်း ကုမ္ပဏီများ က ပြသရောင်းချခဲ့သည်။
အသစ်ထုတ်လုပ်ထားသည့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးသုံး ကာမဆန္ဒဖြေဖျောက်စက်နှင့် ကိရိယာများ
Posted by okkala net at 4:03 AM No comments: Links to this post
သံစုံတေးဂီတ၀ိုင်း နဲ့ ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ အဆိုတော် လင်းလင်း ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် ဂီတပွဲ (ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ ရွှေထွဋ်တင်ကွင်း)
Posted by okkala net at 2:42 AM No comments: Links to this post
Lay Phyu ( ဒိုင်ယာရီ - 2014 )Mp3 Album တပုဒ်ချင်းဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 2:17 AM No comments: Links to this post
ယုံကြည်ရာ Lay Phyu at MCC 13rd August 2014 သီချင်းသစ်လေးပါ
Posted by okkala net at 4:01 AM No comments: Links to this post
ချေ (သဝေထိုးခခွေးယပင့်) Mp3 Lyrics Album
တေးဆို ။ ။ Yair Yint Aung ၊ Ni Ni Khin Zaw ၊ ASH ၊ Lil-Z ၊ X- Box ၊ Thar Thar
၀၂။ နင့် Na Na (Feat - Ni Ni Khin Zaw)
၀၄။ Waiting For You
၀၅။ Better Than Me (Feat::Thar Thar)
၀၆။ မင်းရည်းစားကိုပြောလိုက် (Feat::ASH)
၀၈။ Kiss Me Quick (Feat::X Box)
၁၀။ မင်းအမေတော့ဆူတော့မှာပဲ (Feat::Lil'Z)
Myanmar Academy Awards 2014 အနုပညာရှင်များ ၏ PHOTO များ
Posted by okkala net at 2:37 AM No comments: Links to this post
ငယ်ငယ်က ပုံပြင်လေးပါ။ကတိမတည်သူတွေကို ဆုံးမခဲ့ပုံလေးပါ။မြို့လေးတစ်မြို့မှာ ကြွက်တွေသောင်းကျန်းစဉ်က မြို့ဝန်မင်းက ကြွကိတွေနှိမ်နင်းနိုင်တဲ့သူကို ရွှေဒင်္ဂါးတွေ ပေးမယ်ဆိုခဲ့တယ်။တစ်ကယ့် တစ်ကယ် မပေးတဲ့အခါမှာတော့..,
Posted by okkala net at 10:18 PM No comments: Links to this post
The Interview (2014) Full Movie ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
ဒီဇာတ်ကားအကြောင်း အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ..မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သမ္မတ ကင်ဂျုံအမ်းအား လုပ်ကြံသည့် အကြောင်း ရိုက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသာဖြစ်ပါတယ်
Posted by okkala net at 9:25 PM 1 comment: Links to this post
မိမိရဲ့သွေးပေါင်ချိန် တိုင်းတာပေးမဲ့ Blood Pressure Apk လေးပါ
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော် သည်နေ့ ရေးဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ လူတော်တော်များများလည်းသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါ ဒါလေးကို ထူးဆန်းတာလေးတခုအနေနဲ့သိမ်းဆည်းထားခဲ့တာပါ.... မှန်ကန်တိကျမှုတော့ မရှိနိုင်ပေမယ့် အနီးစပ်ဆုံးတော့ စမ်းသတ်နိုင်တာမို့ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
သူကတော့ မိမိတို့ ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှ အပေါ်သွေး..အောက်သွေး ကိုတိုင်းတာစမ်းသတ်နိုင်တဲ့ Apk လေးတစ်ခုပါဘဲ...လိုအပ်သူများ အောက်မှာ ဒေါင်းယူအသုံးပြု နိုင်ပါတယ်...
Posted by okkala net at 4:43 AM No comments: Links to this post
ဖုန်းကိုတချက်လှုပ်လိုက်တာနဲ့ ပုံတွေယူပေးမဲ့ Screenshot ER Demo 2.4.3.6.apk
Posted by ဘလော့ခရီးသည် on Thursday, December 18, 2014 with No comments
မင်္ဂလာပါ သည် တခါတည်မှာလေးကတော့ မိတ်ဆွေတို့ မရှိမဖြစ်သုံးနေကြတဲ့ screen shot ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍလေးဘဲဖြစ်ပါတယ် ဒါလေးကို ဖုန်းတွေမှာ ဟိုကီး သည်ကီးတွေ ကလစ် ရိုက်ကြတာရှိသလို
တခြားသော apk တွေလည်းအသုံးပြုကြပါတယ်.. ဒါလေးကတော့ အရမ်းကို သက်သာစေပြီး အဆင်ပြေစေတာလေးမို့ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်... လွယ်လွန်းလို့ကို သူကတော့ တဖျတ်ဖျတ်ရိုက်နေ လို့ခက်နေတယ်ဗျာ..တကယ်တကယ်...လေ့လာလိုက်ပါ လိုရင်အောက်မှာ ဒေါင်းယူပါနော်... ဖုန်းကို လှုပ် ခါလိုက်တာနဲ့ ပုံရိုက်ပေးတယ်ဗျာ
Screenshot ER Demo 2.4.3.6.apk
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ apk ကို မိမိတို့ဖုန်းမှာ install လုပ်ပြီးတာနဲ့ ဖွင့်လိုက်ပါနော်..အောက်ကပုံလေးတိုင်းပေါ်လာမယ်
ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Stop Service ဆိုတဲ့နေရာလေးကတော့ အဖွင့် အပိတ်ဖြစ်ပါတယ်... သူ့ကို မလိုအပ်တဲ့ခါ stop လုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်.. သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ play တချက်ကလစ် ပြန်ပိတ်ပြီး လိုရာပုံတွေကို ရိုက်ယူနိုင်ပါတယ်.. ရိုက်တာကလည်း အရမ်းလွယ်ပါတယ် ဖုန်းကို တချက် လှုပ်ခါလိုက်တာနဲ့ ဖျတ် ဆိုပြီး အော်တို ရိုက်ထားလိုက်ပြီပေါ့... ဒါဆို ပုံလေး မိမိရိုက်တာလေးတက်လာပါမယ် အဲပုံလေးကိုတချက် ထိလိုက်တာနဲ့ အောက်တားက စာတန်းတွေ တက်လာမယ် ဥပမာ မလိုခြင် မသိမ်းနဲ့ လိုခြင် သိမ် လို့ရတာပေါ့ ပြန်ရှယ်လို့လည်းရပါတယ်...ကဲဒါဆို တော်တော် အဆင်ပြေမယ်ဆ်ို့ ထင်ပါတယ်နော်... စမ်းလိုက်ကြပါ.... မလိုခြင်ပိတ်ထားနော်ေိေိ မဟုတ်ရင် ဖုန်းလေးကလှုပ်ခါတိုင်း တဖျတ်ဖျတ် ပုံတွေ ရိုက်ယူနေမယ်....အိုခေ...
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >> http://www.myanmarmobileapp.com/2014/12/23/android-%e1%80%96%e1%80%af%e1%80%af%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b8-%e1%80%94%e1%80%b2%e1%82%95-iphone-%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%a1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%80%e1%80%b9-facebook-%e1%80%99%e1%80%bd/
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >> http://www.myanmarmobileapp.comfile:///C:/Documents%20and%20Settings/pc/Desktop/Android%20%E1%80%96%E1%80%AF%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%20%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%95%20iPhone%20%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%20Facebook%20%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%91%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%B6%E1%80%91%E1%80%AF%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%20%E2%80%9CStickered%20for%20Messenger%E2%80%9D%20app%20_%20Myanmar%20Mobile%20App%20Store.htm
Posted by okkala net at 3:12 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 3:06 AM No comments: Links to this post
လေပေါ်မှာ ဘယ်လိုထိုင်လဲဆိုတာ အဆင့်ဆင့်ရိုက်ပြသွားတာပါ
ချာလီလို့ အင်္ဂလိပ်လို နာမည်ပေးထားတဲ့ ချန်ဒရာမိုဟန် မနိုဟာ ရှာမာဟာ လမ်းဘေးရုံသွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ Street Fighter တစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့ အန္တိမ ရည်မှန်းချက်ကတော့ သူ့အဖေ မနိုဟာ ရှာမာကို ထောင်ချောက်ဆင်ပြီး ဒုက္ခပေးသွားတဲ့ ချာရန် ဂရိုဗာကို ပြန်လည် လက်စားချေဖို့ပါ။ ဒီလို လက်စားချေနိုင်ဖို့ သူစောင့်နေတာ ၈ နှစ် ရှိခဲ့ပါပြီ။
ချာလီရဲ့ အဖေ မနိုဟာ ရှာမာဟာ လုံခြုံရေး မီးခံသေတ္တာ ထုတ်လုပ်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူနောက်ဆုံး တီထွင်ထားတဲ့ အဆင့်မြင့် မီးခံသေတ္တာထဲက ဂရိုဗာရဲ့ ရှာလီမာ စိန်တွေ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အမှုမှာ အဓိက တရားခံအဖြစ် ပြစ်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီမီးခံသေတ္တာဟာ မနိုဟာ တစ်ယောက်ထဲကသာ ဖွင့်နိုင်တဲ့ အဆင့်မြင့် ဇီဝနည်းပညာ သုံးထားတာ ဖြစ်ပေမယ့် ချာရန်ဂရိုဗာက ဆေးခတ်ပြီး လုပ်ကြံခဲ့လို့ အခုလို အဖြစ်ဆိုး ကြုံခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချာလီကလည်း ရှာလီမာ စိန်တွေကို ပြန်လည်ခိုးယူပြီး ဂရိုဗာကို လက်စားချေဖို့ ကြံစည်ထားပါတယ်။
ချာလီဟာ နားတစ်ဖက်မကောင်းတဲ့ သူ့ညီဝမ်းကွဲ ဂျက်၊ အတက်ရောဂါရှိပြီး ကောင်မလေးတွေ အသဲစွဲတဲ့ သူ့အဖေရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တမ်မီ၊ ကောင်မလေးတွေက အပေါင်းအသင်း မလုပ်ချင်တဲ့ ဂျက်ရဲ့ တူ ဟက်ကာ ဂျပိုး ရိုဟန်ဆင်း၊ ဂရိုဗာရဲ့သား ဗစ်ကီဂရိုဗာနဲ့ ရုပ်ချင်းဆင်တဲ့ အမူးသမား နန်ဒူ ဘီဟိုက်တို့ကို စုစည်းပြီး လက်စားချေရေး ပြင်ဆင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒူဘိုင်းမှာ ရှိတဲ့ အတ္တလန်တစ်ပမ်း ဟိုတယ်မှာ ခင်းကျင်းပြသမယ့် စိန်တွေကို ခိုးယူဖို့ ပုံစံတူတွေနဲ့ လေ့ကျင့်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပြဿနာကတော့ အဲဒီနေ့မှာ သူတို့သွားရမယ့် အခန်းဟာ WDC လို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာ့အက ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ အသင်းတွေကို ပေးမယ့် အဝတ်လဲခန်း ဖြစ်နေတာပါပဲ။
အဲဒီအတွက်သူတို့ လုပ်ရမယ့် အလုပ်ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ WDC ပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲပြီး ဒူဘိုင်းကို သွားရဖို့ပါ။ ပြဿနာက သူတို့တွေ အနိုင်ရဖို့ အကတိုက်ကျင့်ရပါမယ်။ မဲကိုတော့ အွန်လိုင်းကနေ ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရိုဟန်ဆင်းက စီမံပါလိမ့်မယ်။ တကယ်အကလေ့ကျင့်ဖို့အတွက် မိုဟီနီ ယိုရှိဆိုတဲ့ ဘားအကမယ်တစ်ယောက်ကို နန်ဒူရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဆက်သွယ်မိပါတယ်။ မိုဟီနီနဲ့ ချာလီတို့ရဲ့ အကအဖွဲ့ဟာ အိန္ဒိယ WDC ရွေးပွဲကို အလွယ်တကူ အောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် WDC ပြိုင်ပွဲမှာတော့ မလွယ်ကူတော့ပါဘူး။ ဒီကြားထဲ သူတို့ရဲ့ အကြံအစည် အောင်မြင်ဖို့အတွက် စွန့်စားမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် တလွဲတချော်တွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ …
ချာလီအဖြစ် မင်းသား Shah Rukh Khan၊ နန်ဒူအဖြစ် မင်းသား Abhishek Bachchan၊ မိုဟီနီအဖြစ် မင်းသမီး Deepika Padukone၊ တမ်မီအဖြစ် မင်းသားကြီး Boman Irani၊ ဂျက်အဖြစ် မင်းသား Sonu Soodနဲ့ ရိုဟန်ဆင်းအဖြစ် မင်းသား Vivaan Shahတို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Happy New Year ဇာတ်ကားဟာ ဒေဝါလီနေ့မှာ စတင်ဖြန့်ချိတဲ့ အိန္ဒိယ ဟာသအက်ရှင်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ Farah Khan ရိုက်ကူးပြီး အိန္ဒိယရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး သရုပ်ဆောင်တွေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇာတ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသား ရှရွတ်ခန်းနဲ့ မင်းသမီး ဒီပီကာတို့ဟာ Om Shanti Om ဇာတ်ကားနဲ့ Chennai Express ဇာတ်ကားနှစ်ကားမှာလည်း အတူတွဲသရုပ်ဆောင်ဖူးပြီး တတိယအကြိမ်အဖြစ် ထပ်မံဆုံတွေ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
IMDb မှာ Rating 6.4 ရရှိထားပြီး အိန္ဒိယဇာတ်ကားတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အကအလှတွေနဲ့ တန်ဆာဆင်ထားပါတယ်။ ရိုက်ကွင်းအများစုဟာ ဒူဘိုင်းက Atlantis, the Palm ဟိုတယ်မှာ ရိုက်ကူးထားပြီး ဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးနေစဉ်အတွင်း မင်းသား ရှရွတ်ခန်း လက်မောင်းပြုတ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဘောလိုဒ်ရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာ လောလောဆယ် Dhoom 3၊ Chennai Express နဲ့3Idiots တို့နောက် နံပါတ် ၄ ဝင်ငွေအများဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဒူဘိုင်းရဲ့ အလှအပတွေနဲ့ အိန္ဒိယအကတွေကို ဟာသနဲ့ အက်ရှင်တွေ ရောညှပ်ပြီး ရိုက်ကူးထားတာမို့ အတော်လေး ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ စိတ်ပြေလက်ပျောက်၊ အပန်းဖြေ ကြည့်ချင်သူတွေ၊ ဟာသကား ကြိုက်တတ်သူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကား တစ်ကားပါ။
Full Movie ကို okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယိုများ folder ထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 3:44 AM No comments: Links to this post
လူငယ်တစ်ဦးဟာ ရွေ့လျားနေတဲ့ ဓာတ်လှေကားတစ်ခုထဲမှာပိတ်မိနေပြီး သွေးပျက်ကြောက်ရွံ့စွာ ဓာတ်လှေကားရဲ့ခေါ်ဆောင်ရာနောက်ကို လိုက်ပါနေရပါတယ်။ ဓာတ်လှေကားရဲ့ ခရီးအဆုံးမှာတော့ သူမသိတဲ့ လူငယ်တစ်ချို့ရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံရပြန်တယ်။ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာနဲ့ပဲ သူထွက်ပြေးချိန်
မှာ ဘယ်သူမှသူ့ကို လိုက်မဖမ်းပဲ အော်ဟစ်ရယ်မောနေကြပါတယ်။
မကြာခင်မှာပဲ သူ့ကိုဘာ့ကြောင့်လိုက်မဖမ်းသလဲဆိုတဲ့အဖြေကို သူသိရှိသွားပါတော့တယ်။ သူရောက်ရှိနေတဲ့နေရာဟာ ပတ်ပတ်လည်မှာ နံရံကြီးတစ်ခု ကာဆီးထားလို့ပါပဲ။
အရှေ့က ရောက်ရှိနေတဲ့ လူငယ်လေးတွေဟာလည်း သူ့လိုပဲ ဖမ်းဆီးခံရပြီး ဒီနေရာကို ပို့ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရသူတွေပါ။ ကောင်လေးဟာ သူ့ရဲ့နာမည်သောမတ်ဆိုတာကလွဲပြီး ဘာကိုမှ မမှတ်မိပါဘူး။
ရုတ်တရတ် နံရံကြီးကနေ အသံတွေကြားလာရပြိ်း တံခါးတစ်ချပ်ကိုတွေ့ရှိသွားချိန်မှာ ဝမ်းသာအားရနဲ့ သူပြေးထွက်ဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် ရောက်နှင့်ပြီးသား လူငယ်တွေရဲ့ တားဆီးခြင်းကို ခံရပါတော့တယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီဂိတ်တံခါးဟာ တစ်နေ့မှာ တစ်ကြိမ်သာပွင့်ပြီး အလွန်အန္တရာယ်များလှတဲ့ ဝင်္ကဘာတစ်ခုဆ်ိကို သွားရာဝင်ပေါက်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
လူငယ်တွေဟာ သူတို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကို Glade လို့အမည်ပေးထားပြီး သူတို့ကိုယ်သူတို့ Gladers လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ စောင့်ရှောက်သူ keeper ရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ တာဝန်အသီးသီးကိုခွဲဝေထမ်းဆောင်ကြရပါတယ်။ တောင်နံရံတွေကို ဝင်္ကဘာကြီးတစ်ခုက ကာရံထားပြီး အတွင်းမှာ Grievers လို့ခေါ်တဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေထပ်ဆောင်းတပ်ဆင်ထားတဲ့ ပင့်ကူလိုသတ္တဝါဆိုးကြီးတွေရှိနေပါတယ်။
ရောက်ရှိခဲ့ပြီးသား Glader တွေရဲ့ နှစ်နှစ်ကျော်ကြာအောင် ဒီဝင်္ကဘာထဲက လွတ်မြောက်ဖို့ လေ့လာတွေ့ရှိထားသမျှကို သောမတ်စ်ဟာ သင်ယူရပါတယ်။ ဝင်္ကဘာထဲကို runner လို့ခေါ်တဲ့ သွားရောက်လေ့လာသူတွေဟာ မနက်စောစောတံခါးဖွင့်ချိန်မှာ ဝင်ရောက်ပြီားနေတံခါးမပိတ်မီမှာ ပြန်လာကြရပါတယ်။ ဝင်္ကဘာထဲကနေ ပြန်ထွက်မလာနိုင်တော့တဲ့ runner တွေလည်း အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။
တစ်ရက်မှာတော့တံခါးပိတ်ချိန်အထိ ရောက်မလာကြသေးတဲ့ runner နှစ်ယောက်အတွက် အားလုံးစိတ်ပူနေကြချိန်မှာ သောမတ်စ်ဟာ အန္တရာယ်များလှတဲ့ ဝင်္ကဘာထဲကို ဝင်ရောက်သွားပါတော့တယ်။ တောမတ်စ်ရဲ့ဖြတ်ထိုးဥာဏ်နဲ့ runner နှစ်ဦးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်တဲ့အတွက် တစ်ညအချုပ်ထဲထည့်ခံလိုက်ရပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာတော့ သောမတ်စ်ကို runner အသစ်အဖြစ်တာဝန်ပေးခြင်းခံရပါတော့တယ်။
သောမတ်စ်တစ်ယောက် ဒီဝင်္ကဘာထဲက ရုန်းထွက်နိုင်မှာလား? ဒီဝင်္ကဘာကြီးကို ဘယ်သူတွေ တည်ဆောက်ခဲ့တာလဲ? ဝင်္ကဘာကြီးရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေရှိနေသလဲဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်သာကြည့်ရှုခံစားကြပါလို့။
ဒီဇာတ်ကားကို Dylan O’Brien, Alm Ameen နဲ့ ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင် Ki Hong Lee တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ပရိသတ်ရင်ကို ထိရှစေခဲ့တဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင် Blake Copper က ချက်ခ်ဆိုတဲ့နေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ imdb rating 7.5/10 ရရှိထားပြီး ဒါရိုက်တာကတော့ Wes Ball ဖြစ်ပါတယ်။
Download Link>>>> http://adf.ly/vH4Qg
Posted by okkala net at 3:39 AM No comments: Links to this post
"ဟူဒီးနီ"လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ မျက်လှည့်ပညာရပ်နဲ့ မစိမ်းတဲ့သူတွေ တန်းသိကြမှာပါ။ ၂၀ ရာစုရဲ့ အကျော်ကြားဆုံးသော မျက်လှည့်ပညာရှင်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ဒေးဗစ်ကော်ပါဖီးဆိုတာနဲ့ လူတိုင်းတန်းသိသလိုမျိုး သူ့ခေတ်သူ့အခါကလည်း ဟူဒီးနီဆိုတာနဲ့ ဟိုးလေးတကျော်ကျော်ပါပဲ။
ကိုယ်ပိုင်မျက်လှည့်ပြကွက်တွေ တီထွင်ဖန်တီးပြီး အောင်မြင်မှုယူခဲ့တဲ့သူပါ။
သူနာမည်ကြီးရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ အချုပ်မှန်သမျှက လွတ်အောင်လုပ်ပြနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ Escape Man လို့ နာမည်ကြီးပါတယ်။ "The Handcuff King" လို့လည်း လူသိများပါတယ်။
လက်ထိပ်ခတ်မယ်၊ ကြိုးတုပ်မယ်၊ သေတ္တာထဲထည့်မယ်၊ လက်ထိပ်ခတ်ပြီး ရေထဲခုန်မယ်၊ သေတ္တာထဲထည့်ပြီး မြစ်ထဲပစ်ချမယ်၊ ဘယ်လိုမျိုးတွေနဲ့ပဲ သူ့ကို
တုတ်နှောင်ပြီးထားပေမယ့် သူကတော့ လွတ်အောင်လုပ်ပြနိုင်ပါတယ်။ လက်ထိပ်တွေက ကြိုတင်စီမံထားတဲ့ Fake တွေလို့ ထင်စရာရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရဲအဖွဲ့ပေါင်းစုံက သူ့ကိုစမ်းသပ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ထားတဲ့ လက်ထိပ်နဲ့ပဲခတ်ခတ်၊ သူကတော့ လွတ်တာပါပဲ။ ဒီပြကွက်တွေက ဟူဒီးနီရဲ့ နာမည်ကျော်ပြကွက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Now You See Me ထဲက ကောင်မလေး မှန်ရေကန်ထဲ ခုန်ချပြတာတွေဟာ ဟူဒီးနီ စခဲ့တာပါ။
"ကဲ...ကောင်မလေးရဲ့လက်တွေကို ဖြတ်ပြီးပြီ။ ဒီတစ်ခါ ခန္ဓာကိုယ်ကို အလယ်ကနေ နှစ်ခြမ်းပိုင်းပြပါမယ်။ ပိုင်းလိုက်ပါပြီ။ ပရိသတ်ထဲက တစ်ယောက်လောက် ကျွန်တော့်ကို ကူညီနိုင်မလားမသိဘူး။ ဟိတ်..ချာတိတ်၊ ကိုယ့်ကိုလာကူစမ်းပါလားကွာ။"
နောင်တစ်ချိန်မှာ ဟူဒီးနီလို့ နာမည်ကျော်ကြားလာမယ့် ချာတိတ်လေးဟာ မြေဝိုင်းမျက်လှည့်ပွဲလို့ခေါ်တဲ့ လမ်းဘေးက မျက်လှည့်ဝိုင်းတစ်ခုမှာ
မျက်လှည့်ဆရာကြီးရဲ့ အကူအညီတောင်းခြင်းကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ သူလုပ်လိုက်ရတာကတော့ ဘာမှပြောပလောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒိအဖြစ်အပျက်အပြီးမှာ မျက်လှည့်ပိုးတွေက သူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို စိမ့်ဝင်သွားပါပြီ။ သူလည်း မျက်လှည့်ဆရာဖြစ်ချင်လာပါပြီ။
အဲဒိနောက် မျက်လှည့်ပညာတွေသင်ကြားရင်း အတန်အသင့်တတ်ကျွမ်းလာတဲ့အခါ မြေဝိုင်းမျက်လှည့်ပွဲတွေမှာ သူဖျော်ဖြေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ချစ်စဖွယ်ရုပ်ရည်လေးနဲ့၊ ကလေးလေးတစ်ယောက်က မျက်လှည့်ပြနေတယ်ဆိုတော့ လူအများစိတ်ဝင်စားကြပြီး သူ့ကို အကြွေစေ့လေးတွေ ထည့်ပေးကြပါတယ်။ သူ မျက်လှည့်ပြရတဲ့ အဓိကအကြောင်းကတော့ စီးပွားရေးချိနဲ့နေတဲ့ သူ့မိသားစုအတွက် သူတတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီချင်လို့ပါပဲ။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ မျက်လှည့်ပညာရပ်ကို သူတကယ် စိတ်ဝင်စားလို့ပါ။ ဗီဇက အဲဒိက စပါတယ်ခင်ဗျာ။
"လူကြီးမင်းအပေါင်းတို့၊ ဟောဒီက မစ္စတာဟူဒီးနီမှ သူ့ကိုလက်ထိပ်ခတ်ပြီး သေတ္တာထဲထည့်ထားပေမယ့် လွတ်မြောက်အောင် လုပ်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။"
"လုပ်ဇာတ်ကြီးတွေပါကွာ၊ သေတ္တာထဲက ထွက်ပြမနေပါနဲ့ဦး။ မင်းတကယ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် လက်ထိပ်အစစ်ကနေပဲ လွတ်အောင်လုပ်ပြ။ ရော့...ဒီမှာ"
သူ့ကို ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင် လက်ထိပ်လာခတ်ပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပင် (လက်ထိပ်ကို လေထဲတွင်မြောက်ပြလျက်) "လူကြီးမင်းက ဒီလိုမျိုး လွတ်အောင်လုပ်ပြခိုင်းတာလားခင်ဗျာ"
ဟူဒီးနီဟာ အဲဒိဖြစ်ရပ်နောက်ပိုင်းမှာ တဟုန်ထိုးကျော်ကြားလာပါတယ်။ သာမန်မျက်လှည့်ပညာရှင်အဆင့်ကနေ နာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
အဲဒိနောက်ပိုင်း သူထပ်မံတီထွင်ထားတဲ့ ပြကွက်အဆန်းတွေနဲ့ ဟူဒီးနီတစ်ယောက် အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်လာတဲ့အခါ....။
နာမည်ကျော်မျက်လှည့်ဆရာကြီး ဟူဒီးနီအကြောင်းကို မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Houdini TV Mini Series ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Part 1 နဲ့ Part2ဆိုပြီး နှစ်ပိုင်းထွက်ပါတယ်။ ၂၀ ရာစုရဲ့ ထူးချွန်ပညာရှင်တွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ မျက်လှည့်ဆရာကြီး၊ မျက်လှည့်လောကရဲ့ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြကြီးအကြောင်းဆိုတော့ အပိုင်တောင်ဝယ်သိမ်းထားသင့်ပါသေးတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ သူ့ရဲ့နာမည်ကျော်ပြကွက်တွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုပါ ဖော်ထုတ်ပြသထားပါတယ်။
တော်တော်များများ မျက်လှည့်ကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ မျက်လှည့်ဆရာက ပြကွက်တွေပြသတဲ့အခါ ရင်သပ်ရှုမောဖြစ်ရတာ အမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖော်ထုတ်ပြသတဲ့အခါကျတော့ တော်တော်များများက "သြော်...ဒါလေးများ"ဆိုပြီး ဖြစ်သွားကြပါတယ်။ သြော်...ဒါလေးများ ဆိုရင် အစကတည်းက ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လုပ်ပြကြပါလား။ သူများလုပ်ပြတော့မှ သြော်...ဒါလေးများ တဲ့။
ကိုလံဘတ်စ် ကြက်ဥထောင်ပြသလိုပေါ့။ "ဟေ့ကောင်၊ မင်းကြက်ဥထောင်တတ်လား" ဆိုပြီး ထောင်ခိုင်းတယ်။ ဘယ်လိုထောင်ထောင် မရဘူး။ ကိုလံဘတ်စ်က "ပေး၊ ငါထောင်ပြမယ်"ဆိုပြီး ကြက်ဥကို အားနဲ့ ဆောင့်ချလိုက်တော့ အောက်ခြေကွဲကြေပြီး ထောင်သွားပါတယ်။ အဲဒိတော့ ဟိုကောင်က "သြော်...ဒါလေးများ"တဲ့။ အဲဒါဆိုလည်း အစကတည်းက ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ထောင်ပြပါလား လဒရဲ့။
မျက်လှည့်ဆရာဆိုတာ "သြော်...ဒါလေးများ" တွေကိုပဲ လုပ်ပြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာမှမဆန်းဘူးလို့ သွားမပြောပါနဲ့။ မဝေဖန်ပါနဲ့။
သူ့လိုမျိုး ကိုယ်စဉ်းစားမိရဲ့လား၊ သူ့လိုမျိုး ကိုယ်တီထွင်နိုင်ရဲ့လားဆိုတာ အရင်တွေးကြည့်ပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ မမ်ဘာတွေ ဒီဇာတ်ကားကြည့်ပြီး "သြော်...ဒါလေးများ" မဖြစ်ရင် ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါပြီ။
"A magician is not reallyamagician. He is an actor pretending to beamagician."
မျက်လှည့်ဆရာဆိုတာ မှော်အစွမ်းပေါက်နေတဲ့ ဝိဇ္ဇာတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဝိဇ္ဇာယောင်ဆောင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပါ။
ဒီဇာတ်ကားမှာ ဟူဒီးနီရဲ့ ဘဝဖြတ်သန်းမှုအဆင့်ဆင့်ကို တွေ့ကြရမှာပါ။ သူ့အမေကို သူဘယ်လောက်ချစ်တာတွေ၊ သူ့ဇနီးအပေါ် သူဘယ်လောက် တန်ဖိုးထားတာတွေ၊ မျက်လှည့်ဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံအတွက် ဘယ်လိုအမှုထမ်းခဲ့သလဲဆိုတာတွေ၊ ပရလောကနဲ့ သူနဲ့အကြားက စိန်ခေါ်မှုတွေအကြောင်းကို ကြည့်ရှုကြရမှာပါ
Full Movie ကြည့်ချင်ရင်တော့ okkala နိုင်ငံခြားဗီဒီယိုဇာတ်ကားများ Folder ထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 3:36 AM No comments: Links to this post
မြိတ်အသင်း နှစ် (၁၀၀) ပြည့် ရံပုံငွေ ပဒေသာကပွဲ နှင့် အငြိမ့်ကပွဲ (နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံ)
Posted by okkala net at 2:56 AM No comments: Links to this post
တော်ယုံ စိတ်နဲ့တော့ ၀င်ပြိုင်လို့ မဖြစ်ဘူး သေသွားလောက်တယ်
Posted by okkala net at 4:14 AM No comments: Links to this post
S.I.R အဖွဲ့ ရဲ့ ROCK On The Block ရော့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ (နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ မျှော်စင်ကျွန်း)
Posted by okkala net at 9:20 PM No comments: Links to this post
အနုပညာရှင်များစွာ ပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ပထမအကြိမ် "The Music Run" ပြေးပွဲ (နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့၊ ရန်ကုန်၊ သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်း)
Posted by okkala net at 9:14 PM No comments: Links to this post
အခုရက်ပိုင်း အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ Nymph()maniac ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားက နာမည်ကြီးနေပါတယ်။ Vol I နဲ့ II ဆိုပြီး နှစ်ခွေထွက်လာပါတယ်။ အဲဒီ Nymph()maniac နဲ့ နာမည်ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားလည်း ၂၀၀၈ လောက်က ထွက်ထားပါသေးတယ်။ အဲဒီကားအကြောင်းကို တင်ပြချင်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကို တင်သင့် မတင်သင့် စဉ်းစားပါသေးတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ရိုက်တဲ့ဒါရိုက်တာက အကျိုးဖြစ်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ရိုက်ထားတာပါ။ ပညာပေးသဘောမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ မကြည့်ရသေးသူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့လို့ ယူဆတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ဒီပို့စ်ကို ရေးလိုက်ပါတယ်။
မနိုင်စိန် (မြန်မာ ဗွီဒီယို ဇာတ်ကား) ဇေရဲထက် ၊ ရွှေမှုန်ရတီ ၊ ယွန်းရွှေရည်
ဘန်နီဖြိုး လူပျိုလှည့်တေး Album ထဲ ညှို့ ဆိုတဲ့ MTV အသစ်ကလေးပါ
Posted by okkala net at 10:29 PM No comments: Links to this post